Francisco Brines. Cervantes Nrite 2020. emsfọdụ poems | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Asọmpi na Awards, Ndị edemede, Noticias, Abụọ
Foto: Royal Spanish Academy
Odeegwu Valencian Francis Brines natara ihe Ihe nrite nke Cervantes 2020, nyere ụnyaahụ. Na 88 afọ, na onye nnọchi anya ikpeazụ nke ọgbọ nke 50s, ọ merie akara ngosi kachasị mma na akwụkwọ Spanish. Nke a bụ otu nhọrọ nke poems hoputara n’ọrụ ya ịsọpụrụ ya.
2.1 Banyere njem ụgbọ ala
2.2 N'oge ọkọchị nke oge m bụ nwata
2.3 Onye ka m ga-ahụ n'anya
2.4 Mgbe m ka dị ndụ
Amụrụ n’ime Oliva na 1932. Ọ gụrụ akwụkwọ Nri na Deusto, Valencia na Salamanca na kwa Ihe omuma na akwukwo ozi na Madrid. Ọ bụ nke ọgbọ nke abụọ nke agha na Claudio Rodríguez na José Ángel Valente, n'etiti aha ndị ọzọ, a maara ha dị ka Ọgbọ nke 50s. Ọ bụ onye na-agụ akwụkwọ Spanish na Cambridge na onye nkụzi Spanish na Oxford. Ebe ọ bụ na 2001 ọ bụ onye otu nke Royal Spanish Academy.
N'etiti ọrụ ya Embers, Okwu na ọchịchịrị o Oge mgbụsị akwụkwọ nke Roses. Ihe omuma ndi ozo bu Akwụkwọ ọgụgụ mba na 1987, Nrite Mba maka Akwụkwọ Ozi Spanish na 1999 na Reina Sofía Nrite maka uri na 2010.
Banyere njem ụgbọ ala
ọkụ nke ọdịda anyanwụ
na isi awọ ìhè floats
nke si n'oké osimiri bia.
N'ime m chọrọ ịnọ
ụbọchị nke na-anwụ anwụ,
dị ka a ga - asị na m, mgbe m na - ele ya anya,
nwere ike ịzọpụta ya.
Na onye nọ ebe ahụ ile m anya
na nke ahụ nwere ike ịzọpụta m.
Ìhè agbanweela nwa
e wezugara oké osimiri.
N'oge ọkọchị nke oge m bụ nwata
Na ihe fọdụrụ nke ochie okpomọkụ
n'ikperé mmiri Gris?
Kedu ihe na-adịgide n'ime m site n'oge ọkọchị nke ndụ m?
Ọ bụrụ na m nwere ike ịhọrọ n’ime ihe niile m gabigara
ebe na oge ijikọ ya,
miraculouslọ ọrụ ọrụ ebube ya dọkpụrụ m n'ebe ahụ,
ebe inwe a happyụrị bụ ihe ebumpụta ụwa iji dịrị ndụ.
Ahụmahụ ahụ na-adịgide, dị ka imechi emechi site na nwata;
enweghizi ihe ncheta nke ubochi nke ozo
na nke a afọ ole na ole.
Taa, ebi m ụkọ a,
na nsogbu nke aghugho ufodu ihe mgbaputa
nke ahụ na-enyere m aka ile ụwa anya
jiri ịhụnanya dị mkpa;
ma si otú a mata onwe m nke kwesịrị nrọ nke ndụ.
Kedu ihe bụ ihu ọma, nke ebe obi ụtọ ahụ,
anyaukwu na-apụnara mmadụ ihe
mgbe niile otu ihe oyiyi:
ntutu ya na-akpali ikuku,
Leba anya n'oké osimiri.
Naanị oge ahụ enweghị mmasị.
Kaakwa ya akara n'ime ya, ndụ.
Onye ka m ga-ahụ n'anya
N’ime iko gin a ka m na a drinkụ
oge ezumike n'abalị,
mmiri nke egwu, na acid
ochicho nke anu aru. Naanị dị,
ebe akpụrụ adịghị, kristal
mmanya na egwu owu ọmụma.
N'abalị a agaghị adịkwa onye ọ bụla
ụlọ ọrụ, ma ọ bụ mmegharị ahụ pụtara
ima ke ọkpọsọn̄ udọn̄. Tutu
bụ ụlọ m taa, m ga-erute ya
n'ọzara nke isi-ututu,
M ga-ekpughepụ ahụ m, na onyinyo
M ga-edina na oge na-adịghị ọcha.
Obi ụtọ na oge azụ. Ma ọ dịghị ihe ọ bụla
ma ìhè nke na-adakwasị obodo ahụ
tupu ịhapụ ehihie,
ịgbachi nkịtị n'ụlọ na, na-enweghị gara aga
ma ọ bụ ọdịnihu, m.
Anụ ahụ m, nke dịrị ndụ n'oge
Ọ makwaara na ntụ, ọ chabeghị ọkụ
rue mgbe uyi n'onwe ya,
a na m anokwa n’udo na ihe obula m chefuru
ọ na-amasị m ichefu.
Na udo na ihe niile m hụrụ n'anya
nakwa na m chọrọ ichefu.
Obi ụtọ na oge azụ.
Nke ahụ rutere ma ọ dịkarịa ala
rute n'ọdụ ụgbọ mmiri nke ìhè n'abalị.
Mgbe m ka dị ndụ
Ndụ gbara m gburugburu, dị ka ọ dị n'afọ ndị ahụ
amaolarị, na otu ebube
nke uwa ebighi-ebi. Ihe a na-eme ka ọ gbasaa
site n'oké osimiri, ọkụ dara
si n’ubi mkpụrụ osisi, mbigbọ nke nduru
na ikuku, ndụ m gbara gburugburu,
mgbe m ka di ndu.
Na otu ebube, na agadi anya,
na ịhụnanya ike gwụrụ.
Gịnị ga-abụ olileanya? Dị ndụ;
na ihunanya, ka obi n’abia,
ụwa kwesịrị ntụkwasị obi, ọ bụ ezie na ọ ga-emebi.
N'ịhụ nrọ mebiri emebi nke ndụ
na, ọ bụ ezie na ọ nweghị ike ịbụ, akọchala
echiche ochie nke ebighi-ebi.
Obi na-akasikwa obi, n'ihi na ọ maara
na ụwa nwere ike ịbụ eziokwu mara mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Asọmpi na Awards » Francisco Brines. Ntuziaka Cervantes 2020. Somefọdụ poems
Pablo Nuñez: "Ka onye ọ bụla kwụsị ịnwa ịdepụta"